प्रिय मिना : २४ वर्ष सम्म सँगै यात्रा गरेकी तिमीलाई, समयमै उपचार नपाउँदा बचाउन सकिन् , मलाई माफ गरिदिनु ! - नागरिक खोज
१ हप्ता अगाडि • ३९३ पटक पढिएको
आफ्नी श्रीमतीलाई गु’मा’एपछि भा’ववि’वह्ल बनेका लिलाराम खनालले फेसबुकमा लेखेका छन् । प्रिय मिना कोभिडका कारण भएको दु’खद नि’धनबाट सन्सार गुमाएका छौँ । २४ वर्षको यात्राको यात्री । केही दिन देखिनै लेख्न खोजिरहेको थिए । अस्पतालको ढोका ढक’ढक्या’उँदा सुरुमा ईम’रजेन्सी र अक्सिजन सहितको बेड समेत पाईएन्, आ’ईसीयु र भे’न्टि’लेटर त परैको कुरा पछि एउटा साधारण अस्पतालमा भर्ना भएर आ’ई’सीयु खोज्न थाल्यौँ ।
सबै मातहतका ईष्टमित्र, नेतृत्व, डाक्टर, सुभचिन्तकको सबैको सहयोगले पोखराको मनिपाल हस्पिटलमा लाने हेलिकप्टर र आईसीयु बेड पाउँदा सन्सार जितेको महसुस भयो आ’ई’सीयुमा राख्न सक्यौँ । तर तिमीलाई बचाउन सकिएन् । तिम्रो साथमा रहँदा एउटा श्रीमती मात्र नभई घरको असल गा:र्जेन गु’मा:उँदाको पी’डा कति होला ? यदी भगवान छन् भने तिम्रो स्वर्गमा बास होस् । *** थप अन्य समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
उहि समयमा पन्नाका कलेक्टर संजय कुमार मिश्रले कसैलाई पनि भाग्यले मजदूरबाट राजा बनाउँने बयान दिएका छन् । मजदुरहरू द्वारा प्राप्त हीरा चम्किलो छ, जुन अर्को महिना लिलामीको लागि राखिनेछ । हीरा पाउँदा मजदुरहरुमा खुशीको वातावरण छ । यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्दछ । यस अवसरमा जिल्ला कलेक्टरले मजदुरहरुलाई माला लगाएर सम्मान गरेका छन् ।
सम्बन्ध विच्छेद गरेका र अविवाहित महिलाले अब ४० कटेपछि मासिक भत्ता पाउने
एक महिला १७ महिनादेखि गर्भवती, तर पनि बच्चा जन्मेको छैन (हेर्नुहोस)
को-रोना संक्रमण हुँदा आँखा बिगार्ने घा-तक कालो ढुसीको सङ्क्रमण यि ठाउँमा देखा पर्न थाल्यो, अब कसरी जोगिने त ?